Lahatsary> = Sary + Tantara | Martech Zone
Tsy mamaky ny olona. Tsy zavatra mampatahotra ve izany holazaina izany? Amin'ny maha mpitoraka bilaogy ahy dia manelingelina indrindra izany saingy mila miaiky aho fa tsy mamaky fotsiny ny olona. Mailaka, tranokala, bilaogy, whitepapers, fanambarana an-gazety, takiana amin'ny fampiasa, fanekena fanekena, fe-potoana fanompoana, fahaiza-mamorona…. tsy misy mamaky azy ireo.
Sahirana izahay - te-hahazo ny valiny fotsiny izahay ary tsy te handany fotoana. Tsy manana fotoana marina isika.
Herinandro marathon ho ahy ity herinandro ity tamin'ny nanoratako fitaovam-pivarotana, ny famaliana ny mailaka, ny fanoratana antontan-taratasy takiana ho an'ny mpamorona, ary ny fametrahana fanantenana amin'ny antenaina amin'izay azonay omena… Manomboka mahatsapa aho fa misy sary sy tantara misy fiantraikany bebe kokoa amin'ny tsingerin'ny varotra, ny tsingerin'ny fampandrosoana ary ny tsingerin'ny fampiharana.
Nanjary miharihary fa ilaina ny sary mba hamoronana marika ara-batana amin'ny fitadidian'ny olona. Angamba izany no iray amin'ireo antony Asa-tanana mahazatra Tena mahomby amin'ny azy ireo horonan-tsary.
Tamin'ity volana lasa ity dia nandany andro sy alina izahay tamin'ny a RFP izay namalianay fanontaniana am-polony momba ny vokatra sy ny fahaizany. Nandrotsaka ny teny izahay, nanamboatra kisary tsara ary nivory niaraka tamin'ny orinasa, na mivantana na tamin'ny telefaona. Nizara CD interaktif aza izahay izay topy maso ny orinasanay sy ny serivisinay.
Amin'ny faran'ny dingana, hitantsika ny tenantsika # 2 eo am-pikasana.
Raha ny marina rehetra, ny resadresaka rehetra tamin'ny feo, ny fitaovana ara-barotra ary ny antontan-taratasy izay nandanianay ora dia mbola tsy nanazava sary fohy ny mpanjifa nanana ny endri-javatra lehibe izahay izay takian'izy ireo. Nanao izahay… fa tamin'ny antontan-taratasy rehetra, fivoriana, fandefasan-kafatra, sns, very izany hafatra izany.
Tsy mampihomehy fa ny orinasa manana ny laharana 1 dia nanararaotra nampiseho tamin'ny fomba feno (tao amin'ny laboratoara anatiny) niaraka tamin'ny mpanjifa tamin'ilay entana natolotra. Nampidirina tao amin'ilay dingana izahay tamin'ny daty lasa taty aoriana ary tsy nanery ny hanaovana fihetsiketsehana an-trano. Natoky izahay fa nampifandraisinay tanteraka ny vahaolana takian'izy ireo.
Diso hevitra izahay.
Ny valin-kafatra avy amin'ny mpanjifa dia ny fampisehoana nataonay izay ara-teknika loatra ary tsy nanana ilay hena ny zavatra takian'ny mpanjifa. Tsy miombon-kevitra aho - tena nokendrenay ny fampisehoana anay manontolo momba ny lafiny teknikan'ny rafitray satria nisy tsy fahombiazan'ny orinasa tamin'ny mpivarotra teo aloha. Fantatray fa nijoro irery ny fangatahanay, noho izany dia tianay ny hamantatra an-trano ny teknikanay momba ny fanavahana izay ilain'izy ireo.
Tsy fantatr'izy ireo izany.
Raha jerena izany dia heveriko fa mety ho nandatsaka an-taonina ny antso, antontan-taratasy ary koa ireo kisary izahay ary nanangana horonantsary iray momba ny fomba fiasan'ny fampiharana sy nihoatra ny nantenain'izy ireo. Fantatro fa manoratra zavatra betsaka momba ny horonantsary tato ho ato ao amin'ny bilaogiko aho - saingy lasa mpino amin'ny media aho.
Tags: velona VideoLahatsary Marketinglahatsary "real-time"fivarotanaYouTube
9 Mey 2008 tamin'ny 7:24 hariva
Niresaka tamin'i Mark momba an'io aho androany tao amin'ny Basketball, ary ny zavatra voalohany nanontaniako azy dia ny hoe «nanao sary tamin'ny client ve ianao?” Raha ny zavatra niainako dia tsy misy na inona na inona mampiaraka fifanakalozan-kevitra ara-barotra sy ara-teknika tsara kokoa noho ny fifanakalozan-kevitra mivantana amin'ny "board fotsy" izay ahitanao ny fifandraisana rehetra, ny rafitra, ny antony, ny mpampiasa, sns. Eny amin'ny solaitrabe amin'ny dinika mivantana miaraka amin'ny mpanjifa. Miombon-kevitra aminao aho fa tsy misy mamaky na inona na inona. Raha manoratra zavatra iray aho dia tiako ny mamaky miaraka amin'ny teny fampiasan'ny mpanjifa - ka mitaky ny fohy ny antontan-taratasy.
Miala tsiny amin'ny fanehoan-kevitra lava, fa nasianao bokotra mafana aho, ary voasarika tao amin'ny resaka aho androany…
10 Mey 2008 tamin'ny 3:04 hariva
Ny resaka nifanaovanao tamin'i Marka dia tena namporisika ity bilaogy ity ary miombon-kevitra aminao aho. Raha jerena ny habetsaky ny fitaovana ilaintsika hanosehana an'io vinavina manokana io ao anatin'ny fotoana fohy, dia heveriko ho nilaina aza ny nihoatra ny sary - angamba ny fampifangaroana sary, fampisehoana an-tsoratra ary fampisehoana mivantana.
Azo antoka fa nampidi-doza isika hatramin'ny voalohany - ny orinasa hafa efa natsofoka nefa tsy fantatsika - fa ny zava-misy fa manana ny vokatra tsara kokoa isika dia ho tafavoaka bebe kokoa raha toa ka navelantsika ny mpandray anjara rehetra hitadidy tsara ny vokatray 'fahaiza-manao tsaratsara kokoa.
Misaotra tamin'ny aingam-panahy!
10 Feb 2008 tamin'ny 12:22 maraina
Miala tsiny fa tsy nahavita ny varotra ianao. Ankasitrahana tokoa ny fahamarinanao. Fanandramana manetriketrika ny faha-2 amin'ny zavatra manan-danja. Toa efa nokapohinao ny lohany tamin'ny lohanao tamin'ny fahitanao ny rakipeo video. Raha mieritreritra fampisehoana varotra ho toy ny traikefa fanabeazana ho an'ny mpanjifa ianao dia ho tadidinao fa mianatra amin'ny fomba samihafa ny olona. Fantatry ny mpampianatra fa misy olona manodina ny fianarana amin'ny alàlan'ny fihainoana, ny olona sasany mandrindra fianarana amin'ny alàlan'ny famakiana, ny olona sasany kosa mandrotsaka fianarana amin'ny fanaovana. Raha afaka manome traikefa amin'ny fianarana isan-karazany ianao dia hahatratra ny tanjonao amin'ny fampianarana. Azonao atao foana ny manana fampisehoana marobe miaraka amina fomba samy hafa voaomana mialoha, ary refeso ny mpihaino anao mandritra ny fampisehoana. Raha manome anao torolalana kely toy ny miteny izy ireo hoe: “Henoko ianao, Doug”, na “Tsy hitako izay alehany eto”, dia afaka mahazo fahalalana kely momba ny fomba fianarany… .. ary avy eo mandehana any amin'izany lalana izany . Mirary soa amin'ny famelabelarana manaraka. Ary misaotra tamin'ny horonan-tsary kely mahafinaritra tao amin'ny Blogs tamin'ny tranokalan'ny Commoncraft! Tena vaovao izany! Ary misaotra ihany koa noho ireo rohy miverina amin'ny fanehoan-kevitra teo aloha… apetrako amin'ny lisitry ny bilaogiko ny bilaoginao miaraka amin'ny no-nofollow ao amin'ny tranokalako!
10 Mey 2008 tamin'ny 3:06 hariva
Misaotra Penny! Ny hevitrao dia miantra amin'ny zavatra tena manan-danja - ny tanjonay dia ny hanabe ny mpanjifa. Raha efitrano fianarana io, dia ho nifindra ny mpianatsika. Mila mpampianatra mahay kokoa isika!
10 Feb 2008 tamin'ny 4:29 maraina
Lahatsoratra tsara, Doug. Nanjary lava loatra ny valinteniko, hany ka nataoko lahatsoratra io fa tsy fanehoan-kevitra:
Lahatsary mahery = tantara mahafinaritra + famonoana lehibe
10 Mey 2008 tamin'ny 3:09 hariva
Lahatsoratra tsara, Martin! Manentana ny olona rehetra mamaky ity lahatsoratra ity aho hanatona ny anao.
11 Feb 2008 tamin'ny 8:46 maraina
Misy fitsipika fototra roa tokony harahin'ireo mpivarotra rehetra:
Fitsipika # 1 (avy amin'ny asa fanaovan-gazety) - Ny salan'isan'ny olona dia manana ny haavon'ny famakiana sy ny fahalianan'ny mpianatra amin'ny kilasy faha-6. Mampiasà fehezanteny fohy sy teny kely. Ny fampahalalana manan-danja ihany no mandeha aloha, ny tsy manandanja kosa mandeha farany.
Fitsipika # 2 (avy amin'ny marketing) - Notorahan'ny hafatra mandresy lahatra mihoatra ny 30,000 isan'andro isika (tsy dokam-barotra fotsiny io). Raha te hamaky ny korontana, na dia ho an'ny olona marani-tsaina aza dia mila manaraka ny Fitsipika # 1 ianao.
Ny RFP tsara dia pejy roa fotsiny ary tsy hiresaka afa-tsy izay ilain'ny mpanjifa manokana fa tsy miresaka momba ilay orinasa mpamaly, ny fizotrany, na mampiditra fitaovana marobe. Raha manao izany ianao dia ampidiro anaty index fa ampidiro ao fotsiny ireo fitaovana izay tsy maintsy ananana.